Izintokazi zakwaNtuli ohlelweni i-Family Feud South Africa nosaziwayo waseMelika kwithelevishini futhi ongusomahlaya.
Abafundi Emqhudelwaneni Womdlalo Wethelevishini Waphesheya
Umndeni wakwaNtuli, onabafundi base-UKZN nabafundi ababefunda khona kudala, ububambe iqhaza kwi-Family Feud South Africa, intandokazi yomdlalo wethelevishini oshayelwa ngu-Steve Harvey.
Lomdlalo unemindeni emibili eqhudelanayo ngezimpendulo zenhlolovo ukuze kuphume ozowina imali nemiklomelo.
U-Harvey uthe: ‘Ukuletha i-Family Feud e-Afrika kade kwaba yiphupho lami. Ngikholwa wukuthi loluhlelo luzoshisa izikhotha kulelizwe. Kanti yisiqalo lesi e-Afrika. Ngilindele ukuthi loluhlelo luzale eminye imisebenzi eminingi kwezokuxhumana nakwezamabhizinisi ezwekazini lonke.’
AbakwaNtuli ngoKuhlekonke (owenza iMasiazi KwezeZindlu), uThembalethu (KwezeNgqondo), uLungelo (owenza i-Onazi kwi-Social Sciences), uLungile (owenza i-Onazi Ezifundweni Ngabantu) no-Minnie (owenza i-Bachelor of Arts).
AbakwaNtuli bangabalandeli baloluhlelo kanti bake balwenza ekhaya labo e-New Germany. ‘Lomdlalo omnandi odlalwa wumndeni wasingena, sathokozela ukukwazi kwawo ukuveza izinhlangothi zethu ezingafani. Safisa sengathi sasingaba sohlelweni, sinqobe umdlalo, sikhale semuke nemali. Ngenkathi ithuba liziveza, saligxumela,’ kusho uKuhlekonke.
‘Uma umhlaba ufisa ukwazi ngeNingizimu Afrika, kudingeka ukuthi wazi ukuthi thina siyintsha, sihamba phambili, sibumba umhlaba esiwufisayo. Sikholwa wukuthi uma intsha yabantu besifazane emnyama ivama ukuzibona kuthelevishini, izosheshe ibone ukuthi akukho okuyivimba ukuba seshashalazini lomhlaba wonke, kungaba kwezemfundo ephakeme, ezokungcebeleka noma ezentuthuko,’ kusho uKuhlekonke.
Kugujwe Umsebenzi Omangalisayo Kwezemfundo Esifundweni Sokuqala
Omabhalane Abakhulu BeSayikhathri Base-UKZN Bawine Imiklomelo Engqunqutheleni Ye-SASOP
Kubhekwe I-Civil Engineering Sustainable Transportation Research Group Yase-UKZN
Umfundi Wezobudokotela E-UKZN Uhlanganyele Incwadi Ngabalobi Besimanje Basezweni